अविस्मरणीय यात्रा | K.D'S CaFe for learning and sharing because share is care.
00K.D Tuesday, 24 April 2012 Edit this post
पहिलो भेटमा नै उनको हेराइ बोलाई मलाई मन परेको मात्र होइन अचम्मको लागिरहेको थियो । सारै सरल भाषामा मीठो तरंगित स्वरमा अन्तर उमंगको भाव लुकाउन खोज्दै खुलेर बोलेका थिए उनी मसँग । सारै छोटो कुराकानी पछि हामी छुट्टिएका थियौँ त्यस दिन । त्यस पछिका दिनहरूमा किन हो किन त्यस मान्छेसँग भेट हुन पाए हुदो हो जस्तो भैरहेको थियो ।
तर मेरो घर सदरमुकाम देखि अलि टाढा पर्ने हुनाले त्यो साईत जुर्न सकेको थिएन । धेरै समय पछि एक दिन अचानक सदरमुकाम जाने काम पर्‌यो । आज भेट भैदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा र मनमा अनेकौँ कल्पना गर्दै बस चढेँ । बजारको काम सकेर दाजुलाई भेट्ने बहानामा म उनको अफिसमा पुगेँ । बाटो भरी आज उनीसँग भेट भयो भने के के कुरा गर्ने होला भन्ने योजना बनाएँ । दाजुको अफिसमा पुगेपछि हाम्रो भेट भयो । म भित्रभित्रै अत्यन्त पुलकित थिएँ । मनमा एक किसिमको आनन्द, रोमान्स, उन्माद उत्पन्न भैरहेको भएपनि दाजुको अगाडि त्यस्तो कुनै भाव प्रकट हुन दिइन ।
आज पर्यन्त हामी यहीँ छौँ । यही भूमिको उनै उनै कुनामा । तर फेरि परिचय हुनु अघिका अपरिचित जस्तै । त्यो दिनको असमन्जस्यतालाई सम्झिदा अवाक हुन्छु, आफू व्यक्त हुन नसकेकोमापश्चाताप हुन्छ । हामीले पुरै दिनभरिको यात्रा गर्‍यौँ । उनी खुलेर बोलिरहे, म थोरै बोलेँ र धेरै सुनिरहेँ । अनि आँखै आँखामा हाम्रो आ-आफ्ना अनुभूतिहरू व्यक्त भैरहे । हामी दुवै पुलकित थियौँ । अनि चाहन्थ्यौँ यो यात्रा कहिल्यै नसकियोस् अनन्त अनन्तसम्म चलिरहोस् । तर यात्रा टुङ्गिनु पर्थ्यो टुङ्गियो । हामी दुवै एक आपसबाट टाढा भयौँ । उस्तै अपरिचित जस्तै । मझेरीबाट
K.D'S CaFe for learning and sharing because share is care.: अविस्मरणीय यात्रा